Fankatoavana haingana mitondra fitahiam-be
"Mandeha faingana aho ka tsy mitaredretra, amin'ny fitandremana ny didinao" - SaL 119:60
Miteraka toetra tsara ao amin'ny olona ny fankatoavana ny lalàn'Andriamanitra, toetra mifandrindra amin'izay rehetra madio sy masina ary mahitsy. Maneho mazava ny filazantsaran'i Kristy ny fiainan'ny olona toy izany. Ekeny ny fahasoavan'i Kristy ary raisiny ny fanafahana azy amin'ny herin'ny fahotana. Vokatr'izany dia tafaverina amin'ny laoniny ny fifandraisany amin'Andriamanitra. Feno ny fitiavan'Andriamanitra ny fiainany, voadio ka tsy misy zava-poana sy fitiavan-tena. Noho ny fankatoavany isan'andro ny lalàn'Andriamanitra dia voaova ny toetrany mba hahazoany ny fiainana mandrakizay ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
Nasehon'ny Mpamonjy, nandritra ny fiainany teto an-tany, ny ohatra momba ny fiainana masina izay tokony hiainantsika, raha manokana ny fiainantsika ho amin'ny fanasoavana ireo fanahy mila ny fanampiantsika isika. Tombontsoa ho antsika ny mitondra hafaliana ho an'ireo malahelo am-panahy, sy fahazavana ho an'ireo ao anatin'ny haizina, ary fiainana ho an'ireo efa ho faty. Hoy ny hafatry ny Tompo ho antsika: "Nahoana hianareo no mitoetra foana eto mandritra ny andro?" "Avy ny alina, ka tsy mahazo miasa ny olona". Ny teny rehetra izay tononintsika, ny asa rehetra ataontsika, izay mitondra hafaliana ho an'ny hafa dia hitondra fifaliana ho antsika koa, sy hahatonga ny fiainantsika ho tahaka ny an'i Kristy.
Tokony hoekena sy hotontosaina amim-pifaliana ny asa ataontsika andavan'andro. Ny adidintsika voalohany dia ny haneho amin'ny tenintsika sy ny fihetsitsika ny toetry ny lanitra. Nomena hodinihintsika sy hampiharintsika ny Teny fiainana. Tokony hifanaraka tsara amin'ny lalàn'ny fanjakan'Andriamanitra ny asantsika. Afaka mankasitraka ny asantsika ny lanitra ka hitombo ho amin'ny sehatra lehibe kokoa ny talenta izay ampiasaintsika amin'ny fanompoana Azy. Hamiratra eo anivon'ny haizina ara-pitondran-tenan'izao tontolo izao ny fiainana voatokana ho an'Andriamanitra. Hotarihin'ny fiainana tahaka izany ho amin'ny fahamarinana ao amin'ny Tenin'Andriamanitra ireo fanahy izay efa ho faty (...) — Ms, 49, 1907 .